အမေရိကန် + ကနေဒါ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Bridges ဆွေးနွေးချက်ဘုတ်အဖွဲ့
ရှာရန် site ကို
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Bridges: အဆိုပါပထမဦးစွာဆယ်စုနှစ် - 2019 မှတ်တိုင်အစီရင်ခံစာ
ခေါင်းဆောင်မှုအက္ခရာ, ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအောင်မြင်မှုများ, ဆု, ထောက်ပံ့ငွေစီမံကိန်းများနှင့်ပိုပြီး featuring ကို Global Bridges '' ပထမဦးဆုံးဆယ်စုနှစ်အပေါ်တစ်ဦးကပြည့်စုံအစီရင်ခံစာ။ အစီရင်ခံစာ Read
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Bridges ကွန်ယက်သတင်းလွှာ sign up ပြုလုပ်ပါ
သူချင်းကို Global Bridges ကွန်ယက်ကိုအဖွဲ့ဝင်များက shared ပစ္စည်းများ Explore နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရင်းအမြစ်များကိုတင်ပြရန်။ Access ကို & Share ကို Resouces
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Bridges အဖွဲ့ဝင်များကဆေးရွက်ကြီးမှီခိုကုသမှုများအတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သူတို့၏အလုပ်အတွက်အသိအမှတ်ပြုမြင်ချင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များများအတွက်အကြံပြုချက်များ Submit ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအမည်စာရင်းတင်သွင်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Bridges ဂလိုဘယ်ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေး Bloomberg သတင်းဌာနကပရဟိတဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရ grantees
အဆိုပါFundación Interamericana del Corazónမက္ကစီကို (FIC မက္ကဆီကို) အဖွဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်! အစိုးရမိတ်ဖက်များနှင့်သော့ချက်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းမှတဆင့်သက်သေအထောက်အထား-based ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းထောက်ခံမှုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်မက္ကစီကိုရဲ့စွမ်းရည်ခိုင်မာရေးအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကမ္တာ့ Bridges join
အသင်းဝင်အခမဲ့နှငျ့သငျငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါ '' directory ကိုနှင့်လစဉ်ကွန်ယက်ကိုသတင်းလွှာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
နယူး SRNT တက္ကသိုလ်လက်မှတ်အစီအစဉ်နှင့်စာကြည့်တိုက်စုဆောင်းမှုကမ်းလှမ်း
08 ဧပြီ 2019
ကေတီ Kemper အားဖြင့်
မက်ဒရစ်အတွက် ENSP-CNPT အစည်းအဝေးတွင်ရရှိထားသောနှင့်ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များလက်ရှိအလုပ်နှင့် Connect ကို
23 သြဂုတ် 2018
E-စီးကရက်: ထင်မြင်ချက်စစ်တမ်း + အမေရိကန်ထိပ်သီးအစီရင်ခံစာ
မူပိုင်ခွင့်© 2019 ကို Global Bridges
တို့ကတည်ခင်းဧည် Mayo Clinic
200 ပထမဦးစွာစိန့် SW, Rochester, MN 55905